Jason Mask Kupokana: Achave Mumwe? Vagadziri vemafirimu Clash
musha	Horror Varaidzo Nhau	Jason Mask Kupokana: Achave Mumwe? Vagadziri vemafirimu Clash
Kukurudzira chikamu che13th II
by Timothy Rawles Dai 13, 2022
by Timothy Rawles Dai 13, 2022 4,672 maonero
Kurwira kodzero dzeva NeChishanu iyo 13th franchise yakagadziriswa, asi zvine mhosva chete. Pachine nyaya yehockey mask uye uzvitende kana kuti kwete iyo iconic prop inogona kumisa chero mafirimu emangwana ane naJason Voorhees sezvatinomuziva.
Mune izvo zvinoratidzika sehondo inorwadza yega yega pakati paVictor Miller naSean S. Cunningham - Miller akanyora script yepakutanga ye1980 apo Cunningham akabudisa uye akatungamirira kugadzirisa kwefirimu - Jason Voorhees anogona kunyura mune unyanzvi pane Camp Crystal Lake.
Dambudziko rakatanga kutanga apo Miller aida kodzero dzegwaro rake kana kodzero yacho yapera makore mashoma kumashure. Mumwe mutongi akapa Miller kodzero idzodzo. Asi pane snag, uye zvese zvakatanga nazvo NeChishanu chikamu chegumi nematatu.
Rangarira murume muduku ane chimiro anonzi Shelly (Larry Zerner) mubhaisikopo iroro? Aive prankster ane serious self esteem issues. Muchiitiko chake cherufu, akapfeka hockey mask inosarudzwa naJason uye saka chiratidzo chakazvarwa.
Larry Zerner saShelly muChishanu 13th Chikamu III
Zerner atove gweta rekuvaraidza uye hazvishamise kuti Miller vs. Cunningham nyaya ndeyaanotevera zvakanyanya.
"Ndinoda kuti zvishuwo zvangu zviviri zvinopindirana, mutemo wekodzero uye 'Chishanu 13th'," Zerner akadaro CNN. “Vanhu vanoda Jasoni; vanoda kuona zvakawanda.”
Mashoko akanaka ndeokuti vanogona. Nhau dzakaipa ndezvekuti zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo zviri kutarisirwa nevanhu.
Rangarira, Miller akahwina kodzero kune yepakutanga script, umo (muparadzi alert) amai vaJason (Betsy Palmer) ndiye muurayi.
Pinda mimwe mitemo yakaoma yekodzero kubva 1976 uye zvakagumiswa kuti Miller anogona kuenderera mberi nevatambi vake.
"Iye zvino tinogona kupa rezinesi remakeke, prequel kana kuteedzera mapikicha ... chero mafirimu akadaro asingashandisi mamwe ekuwedzera ane kodzero" akadaro Marc Toberoff, gweta rekodzero rakamirira Miller.
Kwete nekukurumidza. Miller ndiye chete ane hungwaru zvimiro zve chekutanga firimu, asi kwete musoro. Uye haana kodzero kune ekutanga sequels, mavara avo (kusanganisira mukuru Jason), kana chero yapfuura chikamu chekutanga. Cunningham akawana kuchengetedzwa kwehockey mask zvakare.
"Miller iye zvino ane kodzero yekodzero yekuratidzira kwake, kusanganisira kodzero dzekutevera, asi Jason haagone kuratidzwa semunhu mukuru kupfuura mufirimu rekutanga? Hazvina musoro," Toberoff akadaro. "Jason aivepo zvakanyanya mufirimu raMiller. Kutaura zvazviri, Mai Voorhees vakafambisa Jason. Uye, hongu, yekutanga yaive yese yakagadzirirwa sequels. "
Kuzvipedzisa, Miller haakwanise kugadzira bhaisikopo rinopfuura mavara ake ekutanga 1980, uye kana akadaro, anogona kungoita Jason-makore gumi nerimwe. Asi Cunningham haakwanise kushandisa zita raJason pasina mvumo yaMiller.
Uyezve, Cunningham ndiye ane kodzero dzekunze kune NeChishanu iyo 13th saka kunyangwe Miller akafunga kuita bhaisikopo, rinogona kugovaniswa muUS chete
NeChishanu chikamu chegumi nematatu
Kashoma kuti studio iite yakasvibira-inovhenekera chinhu chinopisa bhaisikopo pasina kuve nekodzero dzepasirese.
Nekuda kwechibvumirano chakaitwa muna 1979 pakati paMiller naCunningham, Miller anogona kunge aine kodzero dzepasi rose, asi danho iri harina kurongeka.
"Tinogona rezinesi reterevhizheni, kuongorora Crystal Lake uye kuti Jason akazova zvaari - funga 'Twin Peaks' kana 'Bates Motel,'" Toberoff akaudza CNN.
Maererano ne Toberoff, Cunningham akaita mamirioni kubva "Chishanu the 13," asi Miller, "akawana bupkis."
Panguva ino, munhu anogona kubvunza kuti Marcus Nispel 2009 remake yakaitwa sei naCunningham naMiller uye pahuro dzeumwe neumwe. Zvinoita sekuti vaviri ava vaive nerumwe rudzi rwezvombo zvehondo panguva iyoyo nekuti Miller akamhan'arira kodzero yekodzero muna 2016. Asi pakanga pachine imwe dhirama pamusoro pefirimu raNispel. Iyi firimu yakanyorwa se "sequel" pakutanga izvo zvaireva kuti Miller aizowana mari shoma sezvo yaive isiri gadziriso yepfungwa yake yekutanga. Nekudaro, Miller akati chinyorwa chaakaverenga panguva iyoyo chakaita senge remake, kwete sequel. Iyi firimu yaisanganisira pfungwa yaMiller, asi yakaderedzwa kuita diki inotonhora yakavhurika. Akatora matanho emutemo akakundwa. Iyo firimu yakaenderera mberi uye, zvinoshamisa, dhipatimendi rekushambadzira rakarisundidzira sechigadziriso zvakadaro.
Chishanu Chishanu (13)
Iine requel uye reboot maitiro arikurova Hollywood, mukana weiyo Jason bhaisikopo kuve mombe yemari haina kupokana. Mubvunzo ndewokuti, zvichaitika rini?
"Ini ndinofunga zvechokwadi ichadzoka," Cunningham akadaro. “Asi handikuudze kuti ichadzoka gore rino kana rinotevera. Jason achadzoka mudzimba dzemitambo here? Parizvino, i50-50. "
Chinokosha ndechekuti, vateveri vangada kuona Jason semwana ane makore gumi nerimwe akaremara kana hockey mask-akapfeka behemoth isu tese takajaira? Tizivise zvaunofunga mumashoko.